ISafa ithi iyameseka uSexwale | News24
ISafa ithi iyameseka uSexwale
PHOTO:sourced Usomabhizinisi owaziwayo futhi ongusopolitiki uMnu Tokyo Sexwale uzongela ukhetho lokuba umongameli weFifa ngoNhlolanja (February) wonyaka ozayo.
INHLANGANO ephethe ibhola eNingizimu Afrika iSouth African Football Association (Safa) ithi iyamseka uTokyo Sexwale futhi ithi ndlelanhle ephuphweni lakhe lokuba uMongameli weFifa.
Noma abalandeli bebhola eMzansi nabahlaziyi bezinto ebholeni babona sengathi lesi siqumama nosopolitiki uphupha ehamba noma kuyinto ebukhuni ukwenzeka, iSafa itshengisa ukumthemba noma imnike izibusiso yabuye yazwakalisa ukuthi inaye kulo mkhankaso wokukhethelwa kulesi sikhundla. Abanye bethu basixwaya lesi senzo sikaSexwale futhi kuningi abacabanga ukuthi kuningi okumenza angabi yimfivilithi kulolu khuetho oluzayo, kodwa kuzokhumbuleka ukuthi lomnumzane uyazifela ngebhola. Phela uSexwale wake waxhasa iNational First Division (NFD) nenkampani yakhe iMvelaphanda Holdings, ngaleso sikhathi leligi yaze yaziwa ngoMvela League. Ubuye wadlala enkulu indima ebambisene noSafa 2010 Local Organising Committee (LOC) ukuletha i-2010 World Cup eMzansi. Ziningi ezinye izinhlelo zebhola azisizayo emazingeni aphansi nakuma-amesha (grassroots and amateur level development).
Mhlawumbe omunye umbuzo osungabuzwa ukuthi akekho yini okwiSafa noma-ke obukeka engcono kunoSexwale ongazama okhethweni lweFifa?
Iningi belicabanga ukuthi amadoda aqavile ebholeni laseMzansi njengoDanny Jordaan onguMongameli weSafa abuye abe yiMeya yaseMandela Bay Municipality (Port Elizabeth) no-Irvin Khoza ongusihlalo we-Orlando Pirates nephini likaMongameli weSafa kanye noSihlalo wePSL kanye nabanye abambalwa, amagama abo abengaphakanyiswa noma-ke mhlambe anohlonzo kakhulu ebholeni laseMzansi nase-Africa yonkana. Kuleli sonto isigungu esiphakeme seSafa (National Executive Committee sikhiphe isitatemende esisemthethweni siqiniseka ukuthi siyamxhasa uSexwale okhethweni lukaFifa oluzayo. Lesi nqumo sithathwe yiNEC emva kokuthi lo somabhzinisi enze izinhlelo-ncazelo zakhe (presentation) phambi kwalikomiti. Inhlangano yomhlaba yebhola iFifa uzobamba ukhetho lwakhe ngonyaka ozayo ngoFebruwari 26 ukuze kuvalwe isikhundla esesikhulunyelwe kakhulu sikaMongameli uJoseph “Sepp” Blatter.
“Isinqumo sithathwe ngo elethu futhi iwonkewonke weNEC yeSafa kanti noCaf uzotshelwa ngalesi nqumo sethu. Sizoxoxisana futhi neCaf siwuSafa ukuthi siqhubeka kanjani phambili, “kubeka uMongameli weSafa uDr Danny Jordaan.